नेकपामा सञ्चार मन्त्रीको बहस शुरु, खोटाङबाट निर्वाचित सांसद भट्टराईको पनि चर्चा ? – Sagarmatha Online News Portal
नेकपामा सञ्चार मन्त्रीको बहस शुरु, खोटाङबाट निर्वाचित सांसद भट्टराईको पनि चर्चा ?
काठमाडौं । निवर्तमान सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको राजिनामासँगै नयाँ सञ्चार मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने बहस नेकपामा शुरु भएको छ ।
सुरक्षा प्रेस खरिद प्रक्रियामा एजेन्टसँग कमिसनको मोलमोलाई गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटालाई नेकपाका दुवै अध्यक्षले बालुवाटारमा बोलाएर राजिनामा दिन दबाव दिएका थिए । अहिले सञ्चार र शहरी विकास मन्त्रालय रिक्त छ ।
तीन–तीन पटक खोटाङबाट सांसद जितेका विशाल भट्टराईलाई मन्त्री बनाउन नेकपाभित्र बहस हुन थालेको छ । त्यत्तिमात्र होइन प्रधानमन्त्री ओलिलाई पनि भट्टराईलाई मन्त्री बनाउन दवाव छ । राष्ट्रपति कार्यालयले बाँस्कोटाको राजीनामा स्वीकृत गर्दै उनले सम्हालेको सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई दिएका छन् ।
श्रोतका अनुसार मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुअघि मन्त्री मण्डल पुनर्गठन गर्ने योजनमा रहेका प्रधामन्त्री केपि शर्मा ओलीलाई पछिल्लो घटनाले छिटो मन्त्री बनाउन दवाव बढेको हो । अहिले मन्त्रीका लागि सांसदहरु सोमप्रसाद पाण्डे, राजेन्द्र गौतम, महेस बस्नेत, विशाल भट्टराई, प्रेम आलेको नाम चर्चामा छ ।